MACNAHEEDU YAHAY RAAJADA BARAFKA: JELS, AEROSOLS, DABINKA, AQUA-FUMIGATORS, DIB U EEGISTA QIIMAHA CELCELISKA - GURI, GURI
"Awoodda dinosaur!" Rugaha Rugaha Cabsida
Caannimada iyo aan qabin xaalad nololeed ayaa ah sifooyinka ugu muhiimsan ee ka soocaya baranbarada ka soo cayayaanka kale ee guriga.
Sidaas awgeed, doorashada qalab dhab ah oo wax ku ool ah oo lagula dagaallamo waa dhibaato. Waxaa ka mid ah noocyada kale, khadka ugu weyn ee wax soo saarka cayayaankaas waa "Raptor".
Jel, aerosol, dabin ama jeermis dilaha aqua? Waa suurtagal in suurtogal ah in la doorto oo keliya marka la eego xaalad ah tixgelin faahfaahsan oo ku saabsan mid kasta oo ka mid ah.
Baro baruurtu waxay u timaadaa samatabbixinta halka natiijooyin degdeg ah loo baahan yahay. Waxay ku saleysan tahay labo walxo oo sun ah: cypermethrin iyo tetramethrin. Suntaas waxay saameyneysaa nidaamka dareenka ee cayayaanka, taas oo keenta curyaan.
Qaybta kaalmada - piperonyl butoxide - isticmaalka shakhsi ahaaneed, waxaa loo arkaa mid aan caadi ahayn, laakiin laysku daro laba cayayaanka firfircoon waxay si weyn u wanaajiyaan waxtarka.
Natiijada ka dhalatey walaxda hawada ee hawada, daruur dareyska ayaa la sameeyay, oo ka kooban qaybaha ugu yar. Waxay yihiin gashadaan cidhifka cayayaanka ee cayayaanka ah isla markaana ku dilaan mudo gaaban.
Ilaalinta muddada-dheer ee qolka la daweeyay waa tan Qeyb ka mid ah daawada ayaa ku fadhiya dusha, iyo baranbaradu waxay sii wadaan inay isaga la xiriiraan, iyagoo soo ururinaya boholahooda inta ay socdaan dhaqdhaqaaqa.
Ka hor intaadan isticmaalin aerosol ee Raptor, qolku waa inuu diyaariyaa. Kursiga furan iyo qaanadohaddii wax laga qabanayo jikada, ka dibna Cuntada iyo suxuunta la jecelyahay inay dibedda ka baxaan. Iyadoo lagu buufinayo kiimikada cayayaanka waa in aysan jirin xubno kale oo qoyska ah ama xayawaan guri. Haddii ay jirto aquarium ama terrarium, ka dibna haddii ay suurtogal tahay in la fuliyay ama lagu daboolay dhalada iyo kombiyuutarka ayaa la damiyaa.
qabashada qadka balloon, si xoogan u rux;
ku buufin daroogada dhammaan dushaka dibna maaraynta dayuuradda ilaa sida ugu dhow ee suurtogalka ah ee bartamaha qolka;
goobaha cayayaanka ee cayayaanka, iyo sidoo kale aagagga suurtogalka ah ee deegaankooda iyo waddooyinka socodka dhaqdhaqaaqa leh daryeel gaar ah;
qolka ka bax oo ku dheji 15 daqiiqo;
ka dib markii waqtiga la cayimay, qolka daaweynta, hawo-qaadashada.
Waa muhiim! Marka la buufinayo, aerosol wuxuu ka kooban yahay dhibco yaryar oo geli kara marinka hawada. Si looga hortago sumowga, waa inaad isticmaashaa qalabka ilaalinta shakhsiyeed - maaskaro ama maskaxda!
Laba toddobaad ka dib, habka loo jecel yahay in lagu celiyo, si loo burburiyo baranbaro cusub oo ka soo baxaya ukunta.
Mid ka mid ah dhululubada ayaa ku filan in lagu shaqeeyo aagga 50-60 m2. Aerosol "Raptor" laga bilaabo qiimaha baranbaro ee kala duwan ee 200-240 p.
Daawadani waxay ku saleysan tahay cayayaanka pyrethroid. lambda cyhalothrintaas oo muujineysa saameynta xiriirka-xiidmaha iyo saamiga. Dalku wuxuu leeyahay saameyn gaabis ah: cayayaanka si dhakhso ah uma dhicin, laakiin waxay noqdaan kuwo sidayaal ah sunta.
Ka gudubka dusha sare ee daweynta, sumeeyayaasha waxay soo ururiyaan qaybaha walxaha ku jira boogahooda waxayna u qaadaan buulkooda. Sidaa darteed, dadkooda badan waa la burburiyey xitaa shakhsiyaadka aan la xidhiidhin sunta ka baxsan buulkoodu way dhimanayaan.
Ogow! Jelku wuxuu kaa caawin doonaa in laga takhaluso baranbarada, xitaa haddii ay tiro badan tahay. Laakiin waa inaadan filanin natiijo dhakhso leh markaad codsaneyso!
qolka waa in si fiican loo nadiifiyaa;
codso jeel ah wareegga wareegga qolka leh xariiqyo dhibco ama dhibic, u fiirso taxadar gaar ah meelaha meelaha laga yaabo inay ka yimaaddaan cayayaanka;
ka saar sheyga ku yaal meelaha dushooda oo ha raacin ilaa baranbaradu ay baaba'ayso.
Haddii sabab qaar ka mid ah qayb ka mid ah gelinka la gooyo, laakinse waa in la xereeyo.
Waa muhiim! Si aad u isticmaasho jelka oo la mid ah aerosol laguma talin, sida urka ugu dambeeya waxay ka cabsiin doonaan baranbaradu marka hore!
Tuba waxay leedahay sanka dhuuban, taas oo ay ku mahadsan tahay way ku habboon tahay inaad dalbato. Daawada joogtada ah ee daroogada waxay u ogolaataa inay ku soo jiidato baranbaro muddo dheer ah. Raptor ka soo jeeda baranbaro ma keeno fal-celin xasaasiyadeed iyo in habka loo shaqeynayo uma baahna isticmaalka qalabka ilaalinta shakhsi ahaaneed.
Gel waa foomka dhaqaalaha iyo hal tuubo ayaa ku filan in lagu shaqeeyo qolka 10 m3. Kharashkeedu waa celcelis ahaan 220-250 p.
Raptor dabka sigaarka waa fiican yahay sababtoo ah Waxay yihiin kuwo aan la arki karin oo aan haysan khatar ku iman karta caafimaadka dadka. Waxaa lagu meeleyn karaa meelo adag oo la geeyo carruurta iyo xayawaanka rabaayada ah isla markaana ay halkaas ka tagaan illaa iyo dhammaadka muddada ansax ah.
Xayawaanku wuxuu u shaqeeyaa isla mabda'a sida jel.. Waxay leedahay sanduuq yar oo leh walax suntan gudaha. Baranbaradu waxay gashaa dhinaca xarkaha, waxay cunaan daawo sun ah waxayna qaadaan qaar ka mid ah suunka cidhifka ah ee daboolka. Sidaa daraadeed, falcelinta silsiladu waxay dhacdaa - cayayaanku waxay noqdaan infekshankan midba midka kale ka dib wakhti yar ka dib dhammaan gumeysiga oo dhan waa la burburiyaa.
Lambda cyhalothrin, isagoo ah shay-taabasho-xirmo, waxay galaan habka dheef-shiidka ee baranbarada, wuxuu waxyeeleeyaa habka dhexe ee neerfaha iyo curyaannada cayayaanka. Saacad kaddib waxay dhimataa.
xor ka ah xayawaanka ka soo buuxi iyo u dhig sida ugu dhow ee suurtogalka ah hab nololeedyada baranbarada;
ka tag tuunta oo dhan muddada daaweynta cayayaanka - ilaa 2 bilood.
Waa muhiim! Sida ku jirta kalluunka, isticmaalka isku mar ee aerosol lama ogola!
Natiijada wanaagsan 2-3 baako waa in lagu rakibaa 10 m2 kasta. Haddii ay lagama maarmaan noqoto, ka dib 2 bilood kadib dabaqyada hore ayaa loo bedelayaa kuwa cusub.
Hal halbeeg ayaa jira lix lix jeer, qiimaha celceliska waa 190-230 r.
Akvafumigator ayaa sidoo kale wacda bambada qiiqa. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee firfircooni waa cyphenothrinoo muujinaya saameynta neuroparalytiga. Waxay leedahay saameyn haraaga ah, taasoo ka dhalatay taas tiro badan oo cayayaanka ayaa la burburiyaa.
Diyaargarowga qaabka wakiil uumiga ah ku rid weel bir ah. Marka la taabto biyaha, fal-celin kiimiko ah ayaa dhacda, taasoo ka dhalatay taas uumiga sunta ah ayaa la sii daayaa. Iyada oo ay sabab u tahay awoodda sare ee wax-qabadka, haanta ayaa buuxisa qolka oo dhan iyo waxay gaaraan meelaha ugu caansan. Baranbarada cayayaanka ee neefta ku jirta iyo dhakhso u dhinta.
In codsiga daawadani waa mid fudud:
aquafumigator iyo boorso leh walax waa in laga saaraa baakadka;
awoodda lagu dhisayo xarunta dhexe ee qolka la shaqeynayo;
ku shub dareeraha weelka;
dhig weelka birta gudaha weelka dareeraha;
qolka ka bax oo ku soo dhawee 3 saacadood.
3 asbuuc ka dib, daaweyntu waa suurogal in la soo celiyo si loo burburiyo shakhsiyaadka cusub ee laga soo saaray ukunta.
Qalabkani waa mid wanaagsan sababtoo ah uma baahnid joogitaanka qof ku jira ficilka. Kuder si fudud ayaa u galaa meel kasta oo qallalan iyo meelo kale oo suurtagal ah ee deegaanka iyo dhaqdhaqaaqa cayayaanka. Waxay muujineysaa saameyn aan haynin, sidaas darteedna waxay xaqiijinaysaa dhamaystirka cayayaanka. Waxaa lagu gartaa sunta yar ee bini'aadamka iyo xayawaanka rabaayadda ah.
Qiimaha celceliska mid ka mid ah aqua-fumigator waa 470-530 p.
Doorashada daaweynta baranbarada, waxaa lagama maarmaan ah in la qiimeeyo xaddiga dhaawaca iyo go'aaminta saameynta loo baahan yahay. Si aad uga takhalustid gumeysi yar, si dhakhso ah u habboon, laakiin haddii ay jiraan cayayaanka badan, ka dibna kiiskan waxaa haboon inuu isticmaalo jel ama dhowr xabo. Iyo aqua-fumigator ayaa kuu oggolaanaya inaad nadiifiso qolka oo dhan adiga oo aan joogin iyo adigoon fulin wax ciqaab culus.
Waxaan sidoo kale ku siinaynaa inaad barato qaababka kale ee baranbarada: Dohloks, Hangman, Regent, Karbofos, Fas, Globol, Forsyth, Masha, Geth, Combat, Kukaracha, Raid, Guriga nadiifka ah.
Akhri qoraallo kale oo ku saabsan baranbaro:
Si si guul leh loola dagaallamo dulinkan, waxaad u baahan tahay inaad ogaato meesha ay ka yimaadeen guriga, waxa ay cunayaan? Waa maxay wareeggooda noloshooda iyo sidee bay u tarayaan?
Noocyada ugu caansan ee naga mid ah: casaan iyo madow. Sidee bay u kala duwan yihiin iyo waxa la sameeyo haddii aad ku aragtay baranbarada cad ee gurigaaga?
Xaqiiqooyin xiiso leh: maxay yihiin naaneysyada ay la yimaadeen cayayaankaas; Ma ogtahay in ay jiraan dad duulaya; qaar ka mid ah khuraafaadka ku saabsan meesha uu ka soo galo barafka, iyo maxay micnaheedu yahay?
Baranbaradu waxay u keeni kartaa dhaawac jidheed qof, tusaale ahaan, inuu qaniinyo ama ku dhegto dhegta iyo sanka?
Qoraal faahfaahsan oo ku saabsan sida looga takhaluso, siyaabaha ugu waxtarka badan ee loola dagaallamo lagana hortago.
Hadda suuqyada waxaa jira qalab badan oo ka dhan ah dulin-saarkan. Sidaa daraadeed, waxaan ku soo qoray maqaal ku saabsan sidaad u dooran lahayd daroogada ku habboon, waxay ku qeexday alaabada ugu fiican maanta iyo darajooyinka saaran daroogooyinka.
Dabcan, waxaan iska indha-tiri karnaa dhammaan noocyada hababka caanka ah, gaar ahaan midka ugu caansan waa boric acid.
Waa hagaag, haddii adiga nafsadaada aan la qabsan karin martida aan la socon, waxaan kugula talineynaa inaad la xiriirto xirfadlayaasha. Waxay haystaan ​​teknooloojiyada casriga ah ee halganka waxayna kaa badbaadineysaa dhibaatada mar marka dhan iyo dhammaan.
Soo ogow haddii qalqaaliyeyaasha elektarooniga ah caawiyaan?
Macnaheedu waa mid si fiican loo xaqiijiyay dulin-tiriddan: budada iyo ashyaada, qalimaanta iyo qalimaanta, dabinka, jelka, aerosols.
Asters sanadlaha ah